Gas nkịtị / Biogas Generator
Gbanyụọ / Akpa Gasdị Gas Generator Set
Ọkachamara na-amụba set akụrụngwa
Ebumnuche anyị bụ imepụta ma nye akụrụngwa na-akwado maka gas generator generator dị ka mkpa ndị ahịa si dị. Ghọta uto akụ na ụba site na nrụpụta akụrụngwa ma nye ike akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na gburugburu ebe obibi.
Anyị nwere ọtụtụ ndị injinia nwere ihe karịrị 30 afọ na-arụ ọrụ na ngalaba nke gas engine na generator. Otu R & D nwere ike mepụta ngwa ahịa na atule pụrụ iche maka ihe onye ọrụ chọrọ. Combustion ịme anwansị ngụkọta oge Computer ịme anwansị
Ọhụụ anyị bụ ịghọta mmepe na-adigide mmadụ niile site na iji ike ndụ ndụ iji mepụta ọkụ eletrik. Nke mere na gburugburu ebe obibi anyị na gburugburu ọrụ ya ka mma.
Anyị na-eto gị rows
Weifang Naipute Gas Genset Co., Ltd. e guzobere na 2008. Office dị na Headquarter Base na Weifang obodo, Shandong n'ógbè na e nwere adaba okporo ụzọ na obi ụtọ gburugburu ebe obibi. Factory dị na Advanced Manufacturing Industry Park na nkwado gọọmentị na ezigbo ụlọ ọrụ ikuku. Ebe ọ bụ na etinyere akara NPT, ngwaahịa ndị bụ 10kW-1000kW gas generator setịpụrụ, gụnyere gas generator generator, setịpụrụ biogas generator, mmanụ gas gas generator setịpụrụ, gas-bed generator generator, LPG gas generator set, biomass gas generator set. wdgz…
Ihe kachasị mma maka gị!
Nkọwapụta Ngwaahịa Maka 280KW LPG Gas Generator
Nkọwapụta ngwaahịa maka 50KW LPG gas generator
Gbanyụọ & Akpa Gasdị Gas Generator Set
Nkọwapụta Ngwaahịa Maka 800KW Biomass Gas Ge ...
Product nkọwa N'ihi 400KW Biomass Gas Ge ...
Nkọwapụta Ngwaahịa Maka 260KW Biomass Gas Ge ...
Nkọwapụta Ngwaahịa Maka 80KW Biomass Gas Gen ...
ngwaahịa nkọwa maka 160KW eke gas / ...
Advanced n'ichepụta osooso mpaghara, Mba. 6666, Yintong Street, Baotong Community, High-Tech Mpaghara, Weifang, Shandong, China